Abahlinzeki bePeni leMicroneedling neFektri | I-China Microneedling Ipeni Abenzi
Okokukhipha induna ipeni le-microneedling
IMicroneedle derma pen A6 iyimodeli esezingeni eliphakeme, ingumzimba wensimbi, ikhwalithi enhle kakhulu nempilo ende, iza namabhethri ama-2pcs angavuseleleka, futhi ungalungisa ubude ngokuya ngezimo ezahlukahlukene.Ububanzi bokwelashwa kwepeni le-derma bubanzi kakhulu. Ungayisebenzisa ukuqeda ama-stretch marks, ukukhipha izinduna, nokuphakamisa ubuso. Bambisana ne-essence efanele, wethule uketshezi, uzuze ngempumelelo isimo sesikhumba esihle kakhulu.
Imodeli yakudala iDer280, idizayini yensimbi yeSiliva, ikhwalithi enhle nekhwalithi ephezulu, iyimodeli yamisebenzi amaningi, iza nama-7pcs wokukhanya okuholelekile okuhlukile, ungashintsha ukukhanya okuhlukile, ngokuya ngezidingo ezihlukile.Ingasusa induna kahle, futhi ubuso bungaba ephakamisa ngokushesha. uma ufuna ukuthengisa kabusha le mikhiqizo, sizosekela insizakalo ye-OEM, Qopha uphawu lwakho epeni.
Lo mshini we-pmu oyimodeli uyathengisa kakhulu, ubuchwepheshe be-digital, unezindlela ezimbili, eyodwa imodi ye-pmu, eyebrow, eyeline, tattoo lip, enye imam mode, yokunakekelwa kwesikhumba, ukukhishwa kwesibazi somqubuko, ukuvuselelwa kwesikhumba.
Ipeni eline-microneedling le-Der270 elinama-PC ama-PC amabili
Le peni le-microneedling ipeni lithengisa kakhulu, linamabhethri amabili ngaphakathi, ipeni le-derma liza nama-pcs amabili wenalidi yamahhala, leli peni lisebenza ngokugcoba isikhumba, ukukhishwa kwesibazi, ukuphathwa kwezinwele, ukususwa kophawu.
Electric microneedle uhlelo adjustable ubude derma ipeni
Ikhwalithi ephezulu ye-microneedle derma pen, ubude obususekayo kusuka ku-0-2.5mm, futhi ungakhetha izinaliti ezihlukile, izinaliti eziyi-12/9/36/42, ngokuya ngesidingo sakho. Ukusetshenziswa okusizayo kwezinto ezihlobene kungasusa induna kahle, futhi umphumela ubonakala kakhulu
Ukususwa kwezinduna microneedle derma pen X5
Imodeli entsha yepeni ye-microneedle derma, ukwakheka okunsomi, Yenze idume kakhulu, ibe nobude obuguquguqukayo, kusuka ku-0-2.5mm, ngokwesidingo sakho, ungakhetha inaliti ehlukile. ungashintsha ijubane lisuke ku-1-5level.
ipeni entsha ye-derma enesikrini esibonisa izinga
Leli ipeni elisha le-derma elinezinaliti zesikulufu. it has a screen ukukhombisa ezingeni.
Ukukhanya okusha okuholelekile kokukhanya kwepeni
Ipharamitha yomkhiqizo: Igama lomkhiqizo I-LED elctric derma ipeni Ukunikezwa kwamandla i-Adapter evuselelekayo 4.2V-500MA Isisindo Umzimba oyinhloko 102g Usayizi 17 * 2.1cm Iphakheji 18 * 11 * 4.8cm Izici: Imodeli yekhwalithi ephezulu 7pcs iholele ukukhanya kwesikhumba esihlukile. 2pcs ibhethri, ungakhetha indlela ehlukile yokuyisebenzisa. ukukhanya okuholelekile: Isibani esibomvu sokwenziwa mhlophe kwesikhumba. Ukukhanya okuluhlaza okwemibimbi ebushelelezi. Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okwenzelwe ukukhuthaza isikhumba esibucayi. Ukukhanya okuphuzi kungokwendawo emnyama efiphele. Umbala onsomi ngowele-lymph. Umlenze omhlophe ...
Le peni ye-derma i-a6 microneedling ipeni yokunakekelwa kwesikhumba, ayinantambo negesi kagesi ipeni, inama-pcs amabili ibhethri, neshaja, lokhu kuzokugcina unamandla anele okwenza ukwelashwa nge-microneedling. 1/3/7/9/12/32 / nano ongayikhetha.
prp mesotherapy derma ipeni le-microneedling elinokukhanya okuholelekile
Le modeli prp derma microneedling meso pen ihlanganisa ubuchwepheshe obuningi, umsebenzi we-meso, ukusebenza kwe-derma pen nokusebenza okukhanyayo okuholelekile, lokhu kuzothuthukisa umphumela wokunakekelwa kwesikhumba. Imvamisa leli peni lingasetshenziselwa ukwelashwa ngepeni le-derma futhi likhuthaze ukumunca imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba, efana njengokwelashwa kwe-prp.